Bulla-Xaar, 10 Mar 2014(Alldhooftinle.com)
Madaxweyne Bushkii yaraa ayaa ka galgalanaya in loo bixiyo madaxweynihii ugu xumaa ee Maraykanka soo mara. Inka badan 60% dadka ka faalooda isla markaana wax ka qora siyaasada Maraykanka ayaa u cimaamaday Bush derejada ah inuu ka mid yahay shantii madaxweyne ee ugu xumaa taariikhda Maraykanka. Afarta madaxweyne ee Bush la wadaaga ceebta ayaa kala ah:
Andrew Johnson (1865-1869) Wuxuu xukunka ka degay isagoo 32% keliya ay la dhacsan yihiin xukunkiisa.
Millard Fillmore (1850-1853) Fillmore wuxuu caan ku ahaa sharciyada madowga lagu dhibi jirey. Cadaanku wey jeclaayeen, laakiin taariikhyahada ayaa ku adkaysanaya inuu baal madow ka galay taariikhda markuu soo saaray sharciyo badan oo madawga kala mid dhigaya xayawaanka.
Andrew Jackson (1829-1837) Wuxuu ahaa madaxweynihii ugu Adoonta badnaa. Wuxuu lahaa boqolaal qof oo u shaqeeya. Wuxuu kaloo caan ku ahaa aaminsanaanta sareynta cadaanka oo aanu qarsan jirin. Intii xukunka hayayna waxaa soo maray Maraykanka dhaqaale xumo iyo shaqo la'aan badan.
Woodrow Willson (1913-1921) Xukunka wuxuu ka degey isagoo 27% keliya ay jecelyihiin xukunkiisa.
Bush oo la weydiiyey siduu u arko meesha uu taariikhda ka geli doono ayaa sheegay in dadkoo dhami dhiman doonaan, sidaa darteed aanu dan ka lahayn boqol sano ka dib waxa laga sheegi doono. Tan iyo intii uu xukunka ka degey Bush wuxuu iska mamnuucay inuu siyaasada ka hadlo, wuxuu kaloo diidey inuu warbaahinta la kulmo ama wareysiyo bixiyo.
Qoyska uu ka dhashay ayay iyana taabatay sumcad xumada uu u soo jiiday. Walaalkii oo la yiraahdo Jeb Bush ayaa damcay inuu isu soo sharaxo madaxnimada sanadka 2016, laakiin hooyadii ayaa ka boobtay mikirifoonkii goobtiina kaga dhawaaqday in qof danbe oo reer Bush ah aanu madaxnimo isu soo sharaxi doonin. Maraykanku maaha reer Bush oo keliya doorta cid kale, mardanbe ma doonayo inaan maqlo cayda wiilashayda, ayay tiri Barbara Bush oo si cad u diidey inuu wiilkeedu is sharaxo.
Waxyaabaha lagu haysto Bush ee geyeysiiyey in lagu murmo inuu yahay madaxweynii ugu xumaa Maraykana in kale ayaa waxaa ka mid ah, dagaalkii Ciraaq, Duufaantii Katriina iyo hoos u dhicii dhaqaalaha Maraykanka ee bilaabmay 2008. Dagaalka Ciraaq oo ahaa meesha laga raacay Bush, ayuu tilmaamay in aanu weligii ilaawi doonin. Dagaalkaas war qaldan ayaan ku galay laakiin waan ku faraxsanahay in Sadaam Xuseen aanu Ciraaq ka talin hadda, ayuu yiri Bush.